Iindibano Zakudala ZamaNgqina KaYehova EMexico City
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla yaseOstreliya Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiAmis IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCakchiquel (Sakumbindi) IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChol IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDouala IsiEdo IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHerero IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJula IsiKabiye IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMbunda IsiMingrelian IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiMotu IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseCanton (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseCanton (Esiqhelekileyo) IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrhobo IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiKurdish Kurmanji isiZapotec (saseIsthmus)
KUNGASEKUPHELENI kukaNovemba ngo-1932 eMexico City. Kwiveki nje edlulileyo kubekho iirobhothi zokuqala kwesi sixeko siphithizelayo sinabantu abangaphezu kwesigidi. Kodwa loo nto ngoku ayisengondaba-mlonyeni. Abacholacholi beendaba bathetha ngento eza kwenzeka kule veki. Bakwisikhululo sikaloliwe neekhamera zabo, belindele undwendwe olubekekileyo, uJoseph F. Rutherford, owayengumongameli weWatch Tower Society ngoko. AmaNgqina alapho nawo amlindele efuna ukumamkela njengoko eze kwindibano yawo yeentsuku ezintathu.
IThe Golden Age yathi, “Akuthandabuzeki ukuba le ndibano iza kuba sisihlandlo esibalulekileyo kwimbali yokuhambela phambili kweNyaniso kwiriphabliki yaseMexico.” Kodwa ke yintoni le yenza le ndibano ekwakuze abantu abamalunga ne-150 kuphela ibaluleke kangaka?
Ngaphambi kwale ndibano, umsebenzi woBukumkani wawungahambeli ndawo eMexico. Ukususela ngo-1919, kwakubakho iindibano ezincinci, kodwa inani lamabandla laya licutheka kwiminyaka eyalandelayo. Xa kwavulwa iofisi yesebe eMexico City ngo-1929, kwaba ngathi izinto ziza kuba ngcono. Kodwa kwabakho imiqobo. Xa kwaphuma ulwalathiso lokuba kuyekwe ukushishinwa ngoxa kushunyayelwa, omnye umshumayeli wexesha elizeleyo owayenomsindo wabeka phantsi waza waya kuzivulela elakhe iqela leBhayibhile. Kwangelo xesha, umveleli wesebe wenza into engahambisani nezibhalo kwaza kwafuneka atshintshwe. AmaNgqina athembekileyo aseMexico ayefuna nyhani ukukhuthazwa.
Ngoxa uMzalwana uRutherford wayetyelele apho, wabakhuthaza kakhulu abo bathembekileyo, ngokunikela iintetho ezibangel’ umdla ezimbini kuloo ndibano neentetho ezintlanu kwirediyo. Zaziqala izikhululo zerediyo zaseMexico ukusasaza iindaba ezilungileyo kwelo lizwe. Emva kwaloo ndibano, umveleli owayesandul’ ukumiselwa walungelelanisa umsebenzi, aza amaNgqina awayezimisele aqhubeka ehlaziyekile yaye esikelelwa nguYehova.
Indibano ka-1941 eMexico City
Kunyaka olandelayo kwabakho iindibano ezimbini kwelo lizwe, enye ikwisixeko esilizibuko saseVeracruz, enye iseMexico City. Ukusebenza nzima entsimini kwaba nemiphumo emihle. Ngo-1931 kwakukho abavakalisi abayi-82. Kwiminyaka elishumi kamva, elo nani laphindaphindeka kalishumi! Ngo-1941 kweza abantu abamalunga ne-1 000 eMexico City kwiNdibano Yobuthixo.
Ngo-1943 amaNgqina anxiba iibhodi ezazibhalwe macala ukuze azise abantu ngeNdibano Yobuthixo “Yohlanga Olukhululekileyo” eyayiza kubakho kwizixeko eziyi-12 zaseMexico. * Kwakudityaniswa iibhodi ezimbini apha emagxeni zize zijinge, enye ibe ngaphambili, enye ibe ngasemva, le yindlela yokwazisa abantu eyayisetyenziswa ngamaNgqina ukususela ngo-1936.
Imagazini ka-1944 ibonisa iphulo leebhodi ezazinxitywa ngaphambili nangasemva eMexico City
Ithetha ngendlela eliphumelele ngayo eli phulo leebhodi ezinxitywa ngaphambili nangasemva eMexico City, imagazini iLa Nación yathi: “Kusuku lokuqala [lwendibano, amaNgqina] acelwa ukuba ameme abantu abangakumbi. Ngosuku olulandelayo abantu abazange banele kuloo ndawo yendibano.” Eli phulo zange lithandwe tu yiCawa YamaKatolika, eyaququzelela iphulo elalisilwa amaNgqina. Nangona babechaswa, abazalwana noodade ababengoyiki ngokoyikiswa baqhubeka besiya ezitratweni. ILa Nación yaphinda yathi: “Sonke isixeko sababona . . . amadoda—nabafazi—benxibe iibhodi ngaphambili nangasemva.” Inqaku laloo magazini labonisa umzalwana esesitratweni saseMexico City. Ezantsi kwaloo mfanekiso kubhalwe: “Batyhutyha izitrato.”
“IIBHEDI EZAZITOFOTO KWAYE ZIFUDUMELE KUNESAMENTE”
Ngaloo minyaka, amaNgqina amaninzi kwakufuneka ancame izinto ezithile ukuze akwazi ukuya kwezo ndibano zimbalwa zaziseMexico. Abantu abaninzi babesuka kwiilali ezisemagqagaleni, ekungekho loliwe nazindlela kuzo. Elinye ibandla labhala lathi, “Ekuphela kwento efikayo apha ziintambo zocingo.” Ngoko abantu abeze kwezo ndibano kwakufuneka bakhwele iimeyile okanye bahambe iintsuku ezininzi ukuze baye apho kukho uloliwe owayeza kubasa kwisixeko esinendibano.
AmaNgqina amaninzi ayezihluphekela, engenayo nale yokuya imali. Amaninzi ayefika ahlale namaNgqina asekuhlaleni, awayewamkela emakhayeni awo. Amanye ayelala kwiiHolo ZoBukumkani. Ngenye indibano, abantu abayi-90 ababeze endibanweni bafikela esebeni, belala “phezu kweebhokisi zeencwadi eziyi-20 umntu ngamnye.” INcwadi Yonyaka yathi iindwendwe ezinoxabiso zathi ezi “bhedi zazitofotofo ibe zifudumele kunesamente.”
Loo maNgqina anoxabiso, awayekwezo ndibano ayeyibona into awayezincamela yona. Namhlanje, inani labavakalisi eMexico liyanda seliza kufika kwisigidi, ibe basenoxabiso. * Ngo-1949 ingxelo yesebe laseMexico yathi ngabazalwana: “Amaxesha anzima awabenzi bathothe kuba enye yezona zinto bancokola ngazo yindibano nganye esiba nayo nasemva kwexesha sele idlulile. Abazalwana basoloko bebuza, Iza kubakho nini indibano elandelayo?” Le nto ithethwa kule ngxelo isenjalo nanamhlanje.—Siphakula koovimba bethu kuMbindi Merika.
^ isiqe. 9 Ngokutsho kweNcwadi Yonyaka Ka-1944, le ndibano “yenza amangqina kaYehova aziwa eMexico.”
^ isiqe. 14 Bebeyi-2 262 646 abantu abebeze kwiSikhumbuzo sika-2016 eMexico.
“Akukho Ndlela Imbi Okanye Inde”
“Ndivuna Iziqhamo Ezidumisa UYehova”